किन बढ्दैछ सुनको मूल्य ? - Sutra News
किन बढ्दैछ सुनको मूल्य ?
सुन तोलाको पाँच सयले बढ्यो
सुन प्रतितोला ९९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार
सुन प्रतितोला ९९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार
काठमाडौं- सुनको मूल्य साउनयता ६ हजार ९ सय रुपैयाँले बढेको छ । साउनको पहिलो दिन प्रतितोला ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य १८ गतेसम्म आइपुग्दा प्रतितोला ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले यतिबेला माग बढेपनि उत्पादन घटिरहेको बताए । ‘सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वार्षिक उत्पादन र कारोबार ४ हजार ५ सय टन रहेकोमा कोभिडका कारण अहिले घटेर ३ हजार ५ सय टनमात्रै भएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यी पाँच कारणले सुनको मूल्य बढिरहेको छ ।
- विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण लगानीकर्ताहरू अन्य क्षेत्रभन्दा सुनमा लगानी गर्न आकर्षित देखिएका छन् ।
- अमेरिका र चीनको ब्यापार युद्ध ।
- सुनको भन्सार शुल्क बढ्नु ।
- विश्व बैंकहरूको मनिटरिङ गर्ने संस्थाले नोट निष्काशन गर्न २०२१ देखि सुनलाई महत्व दिनु ।
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको उत्पादनमा कमि आउनु ।
सुन–चाँदीको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण हो, कोरोना भाइरस । यसैका कारण अन्य क्षेत्रका व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र धरासयी बनेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सुन–चाँदी व्यवसायमा परेको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा आफ्नो पुँजी सुरक्षित नभएका कारण लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ लगानी गर्न आकर्षित भएको शाक्यले बताए ।
नेपालको सुन–चाँदी व्यवसाय पूरै आयातमा निर्भर रहेको छ । यसकारण नेपालमा सुन–चाँदीको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार निर्धारण हुन्छ ।
सुनको मूल्य बढ्नुको अर्को कारण नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा सुनको भन्सार शुल्क बढाउनु पनि हो । गत आर्थिक वर्षभन्दा प्रति १० ग्राम ६ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भन्सार शुल्क बढेर प्रति १० ग्राम ८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा सुनको भन्सार रेट १५ सय रुपैयाँले बढेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले सुनको मूल्य बढ्नुको कारण अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धलाई पनि लिइएको छ । लामो समयदेखि चलेको अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धले अहिले झन उग्ररुप लिएको र यसको असर सुन–चाँदी व्यवसायमा परेको शाक्यको भनाइ छ ।
‘बैंक अफ अमेरिकाले बाउन्सको ब्याजदर घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यसको कारण पनि लगानीकर्ताहरूले सुनमा लगानी गरेका छन् । जसका कारण सुनको मूल्य बढेको हो,’ शाक्यले भने ।
विश्वका बैंकहरू मनिटरिङ गर्ने संस्थाले नोट निष्काशनको लागि गुठीमा राख्नुपर्ने सम्पत्तिमा २०२१ बाट सुनलाई महत्व दिने योजना बनाएको कारण पनि विश्व बजारमा सुनको भाउ बढेको सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
मूल्य बढेसँगै सुनको ब्यापार भने ठप्प बनेका छ । बजारमा सुन किन्नेभन्दा पनि सुन बेच्नेहरूको संख्या बढेको छ ।
साउनमा सुनको मूल्य
प्रकाशित :श्रावण १८, २०७७ आइतवार - १५:०९:४०
किन दिनदिनै घटबढ भइरहेको छ सुनको मूल्य ?
काठमाडौं महानगरका १२३ पसलेलाई कारबाही, १२ लाख बढी राजश्व संकलन
बिहीबार सेयर बजार सकारात्मक, बजारमा उत्साह आउनुको यस्ता छन् कारण
भाडा दोब्बर भएपछि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा यात्रु घट्दै, प्लेनमा बढ्दै